Madaxweynaha France oo ka laabtay taageerada wargayskii Nebiga u gafey kadib markii Islaamku go’doomiyey
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu fahamsan yahay dareenka ay Muslimiinta ka qabaan sawir gacmeedyada lagu aflagaadeynayo Nebi Muxamed NNKH oo uu daabacay wargeyska Charlie Hebdo.
“Sawir gacmeedyadan ma ahan mashruuc dowladeed, balse waxay ka imanayaan wargeys madax banaan oo xor ah, islamarkaana aan ku xirneyn dowladda,” ayuu yiri madaxweynaha dalka France.
Macron, oo horay u sheegay in dalkiisu uusan tallaabo ka qaadi doonin wargayskaasi ayaa sheegay inuu dareensan yahay dhibaatada jirta maadaama dunida Islaamku ay falcelin aan caadi ahayn ka bixisay hadalkiisa taasi oo xitaa sababtay saamayn dhaqaale.
“Waxaan u maleynayaa in falcelinta ay ka dhalatay been iyo doorin lagu sameeyey erayadeyda, sidaas darteedna dadka ay u fahmeen inaan taageersanahay sawir gacmeedyadan, waxaa jiri dad roga Islaamka ayaga oo sheegayana inay difaacayaan diintan.” Ayuu yiri Macon.
Emmanual Macron oo u muuqda inuu doonayo inuu dejiyo xiisadda iyo carrada ka dhalatay hadalladiisii hore oo keenay in badeecadaha Faransiiska laga qaadaco dunida Islaamka, ayaa sheegay in dowladdiisa aysan marnaba qaadan sawir gacmeedyo aflagaado ah.
Dhanka kalena, wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gérald Darmaninayaa sheegay inay suurta-gal tahay weeraro kale oo ka dhacay ciidda Faransiiska. “Waxaan dagaal kula jirnaa cadow gudaha iyo mid dibedda ah, iyo fikradda Islaamiyiinta,” ayuu kusii daray.